समाज Archives - Page 138 of 168 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी ९ जना व्यवसायी तथा फर्मले ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानमा आरोपितहरूले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको भेटिएपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले आरोपितहरूले झुटा खरिद विवरणसहितको मूल्य […]
२८ भाद्र २०७४, बुधबार १९:३३ September 13, 2017 Nonstop Khabar
चौतारा, २८ भदौ । नागरिकता र सरकारी छाप कीर्ते गरेको अभियोगमा कैद तथा जरिवानाको फैसला भई ११ वर्षदेखि फरार दोषीलाई प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ । साबिक मेलम्ची गाविस –७ हाल मेलम्ची नगरपालिका–११ बस्ने तत्कालीन गाविसका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेलाई कारागार लगिएको जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकका स्रेस्तेदार महेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन् । दोषी […]
निगममा अर्बौको घोटाला गर्ने गोपाल खड्कामाथि कारवाहीको तयारी
२८ भाद्र २०७४, बुधबार ०९:२२ September 13, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २८ भदाै । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई कारबाही गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्दा चलनचल्तीभन्दा चारगुना बढी मूल्य भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको पुष्टि गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोमबार साँझ सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने […]
काठमाडौं, २८ भदौ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध घात गर्ने कांग्रेसी कार्यकर्ताको सूचीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ पनि परेका छन्। कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँले चितवनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको थियो। कांग्रेसको अनुशासन समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि डा. खनियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। रमेश रिजाल नेतृत्वको अनुशासन समितिले प्राप्त उजुरीमाथि […]
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार १०:३३ September 14, 2017 Nonstop Khabar
सर्लाही, २७ भदाै । सर्लाहीकाे हरिअाेनमा रहेकाे वन कार्यालयमा अागजनी भएकाे छ । साेमवार साँझ अज्ञात समूहले वन कार्यालयका कर्मचारीलार्इ बाँधेर लडाइदिएकाे र कार्यालयमा अागजनी गरेकाे बताइएकाे छ । हरिअाेन नगरपालिका वार्ड नं ६ घुर्काैलीमा रहेकाे सागरनाथ वनपरियाेजनाकाे कार्यालयमा अागजनी गरिएकाे हाे । आगजनी गर्नु अघि कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई बाँधेर लडाएकाे बताइएकाे छ । सोमबार […]
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०२:२६ September 12, 2017 Nonstop Khabar
लमजुङ, २६ भदौ । ठाडोभाकाका अभियन्ता दीर्घराज अधिकारी अर्थात ‘भेडीखर्के साँइला’को निधन भएको छ । चौरासी वर्षको उमेरमा आज साँझ उहाँको निधन भएको हो । सुन्दरबजार नपास्थित आफ्नै छोरीज्वाँइको निवासमा उहाँको निधन भएको नाति सुबोध लौडारीले बताउनुभयो । चिकित्सकका अनुसार उहाँलाई एक महिनादेखि दमका साथै ज्वरो, खान मन नहुनेलगायत समस्या रहेको र शरीरमा पानीको मात्रा […]
काठमाडौँ, २६ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा जग्गा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि पेश गरेको प्रतिवेदनमा चलेको मूल्यभन्दा १० गुणा बढीसम्म तिरेर खरिद गरिएको उल्लेख छ […]
२७ भाद्र २०७४, मंगलवार ०२:२२ September 12, 2017 Nonstop Khabar
डोल्पा, २६ भदौ । जुफाल विमानस्थलमा समिट एअरको जहाजले आजदेखि उडान भर्न थालेको छ । बिहान ९ बजे समिट एअरको जहाजले जुफाल विमानस्थलमा अवतरण गरेको नागरिक उडड्यनको कार्यालय जुफलले जनाएको छ । समिट एअरका क्याप्टेन रवीन्द्र रोकाया, क्याप्टेन एडी शेर्पा र एअर होस्टेज के थापासहित तीन सदस्यीय चालक दलको टोलीले पहिलो पटक १८ सिट क्षमताको […]
काठमाडौँ, २६ भदौ । नेपाली कलाको विकासमा संस्थागत प्रयत्न हुनुपर्ने अग्रज कलाकार गोविन्दलाल सिंह डंगोलले बताउनुभएको छ । ललितपुर, पुल्चोकस्थित पार्क ग्यालरीमा नेपाल ललितकला पत्रकार समाजको नियमित कार्यक्रम ‘कलाका कुरा’ को १७औंँ शृङ्खलामा डंगोलले कलाको विकास र प्रवद्र्धनमा योजनागत रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “नेपाली कलाको विकासमा कला शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा राज्य […]
Previous 1 … 137 138 139 … 168 Next